स्थायी लेजर आईपीएल कपाल हटाउने Technical-प्राविधिक जानकारी - शेन्जेन कुनै स्मार्ट स्मार्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
स्थायी लेजर आईपीएल कपाल हटाउने Ⅰ
समय: 2020-03-11 हिट्स: 120
कति उपचारहरू नोबल आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण आवश्यक हुनेछ?
कपाल तीन अनाकल, क्याटागेन, र टेलोजेन भनिन्छ। आईपीएल र लेजर आईपीएल टेक्नोलोजीले एनागेन (वा सक्रिय वृद्धि) चरणमा कपालको रment्ग उच्चतम हुँदा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा अन्तरक्रिया गर्दछ। यसैले स्थायी कपाल घटाउन पूरा गर्न बहुविध उपचार आवश्यक हुन्छ। औसतमा करीव २०% घटाई प्रारम्भिक उपचारमा ध्यान दिइनेछ र to%% घटाई चार देखि छवटा उपचारमा महसुस गर्न सकिन्छ। याद गर्नुहोस् उपचार पछि कटौती स्थायी हुनेछ!
उपचार पछि तुरुन्त के हुन्छ?
आईपीएलले कपाललाई थर्मेली नष्ट गर्न न्यूनतम इनभेटिभ तरिकामा काम गर्दछ। प्रक्रियाले यति छिटो र आरामदायी बनाउछ। उपचारको दुई वा तीन दिन पछि, पराल फेरि देखा पर्न सक्छ। यो नयाँ कपालको बृद्धि होइन, तर केवल शरीरले थर्मली क्षतिग्रस्त कपाल बहाउँदछ; बल्ब सहित
जब यो कपाल पूरै शेड हुन्छ, यो तपाईंको अर्को उपचारको लागि समय हो (सामान्यतया चार देखि आठ हप्ता)। जसरी आईपीएल छालाबाट कपालको दायाँ भित्र छिर्दछ, यो यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने उपचारहरू बीच दाढी गर्नु ठीक छ, तर ट्वेज वा मोम नगर्नुहोस्, किनकि त्यसले लक्षित गर्दछ।
के त्यहाँ उपचारलाई असर गर्ने कुनै पक्षहरू छन्?
केहि कारकहरूले तपाईंको शरीरलाई प्रकाशको लागि बढी संवेदनशील बनाउन सक्छ, जसले ग्राहकलाई उपचारबाट बाहिर निकाल्दैन तर परामर्शको बखत खुलासा गर्नै पर्दछ। केहि औषधिहरू जस्तै मांसपेशी शिथिलता, एन्टि-डिप्रेसन्ट्स, एन्टी-क्यान्सर ड्रग्स, एक्ने ड्रग्स र रेटिन-ए समावेश सामयिक क्रिमहरू उपचार प्यारामिटरहरूमा प्रभाव पार्दछन्। उपचार अघि परीक्षण प्याचहरू कुनै पनि ग्राहक अवस्थाको लागि सुरक्षित र प्रभावकारी परिणामहरू सुनिश्चित गर्छन्।
के त्यहाँ उपचारका कुनै साइड इफेक्ट छन् वा विशेष पोस्ट उपचार निर्देशनहरू?
उत्तम परिणामहरूको लागि, सक्रिय ट्यानिंग र कृत्रिम ट्यानिंग उत्पादनहरूको प्रयोग उपचार गर्नु भन्दा पहिले र उपचारको क्रममा रोकिनु पर्छ। उपचार पछि, उपचार क्षेत्रमा सनब्लक (SPF25 +) प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं उपचारको क्रममा दाह्री काट्न सक्नुहुन्छ, तर कपाललाई मोम वा चिम्टो नगर्नुहोस्, किनकि यसले लक्ष्य (बल्ब) हटाउनेछ।
उपचारको पछाडि तपाईले उपचार साइटमा केही रातो र / वा न्यानोपन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, जुन सामान्य हो र यदि चाहिन्छ भने चिसो भिजेको कम्प्रेसबाट चिसो गर्न सकिन्छ। १२ - २ 12 घण्टा पछि उपचारको लागि जोरदार व्यायाम, अत्तरयुक्त डिओडोरन्टहरू, भारी क्लोरीन पोखरीहरू र / वा तातो भँवर स्नान, सौना, आदि जोगिन सिफारिस गरिन्छ।
अघिल्लो: यी कपाल हटाउने विधिहरू अल्छी बच्चाहरूको लागि उपयुक्त हुँदैन
अर्को: स्थायी लेजर आईपीएल कपाल हटाउने Ⅱ